Ihe eji eme akwa, ụgbọ mmiri ka ọ bụ eze? echiche bara uru maka ime ụlọ ụmụaka gị ... - Dafne Italian Design
Home Ndụmọdụ na n'ike mmụọ nsọ Ugbo ala, ụgbọ ma ọ bụ ...
Ịchọrọ inye ụmụaka ime ụlọ n'ime ụzọ okike na n'ezie?
Ọ bụrụ na ụmụ gị bụ ndị na-ahụ ụgbọ ala, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ihe ndị dị na ha, nakwa, karịsịa, ebe a ka anyị ga-ewebata gị ọtụtụ akwa a Ụdị ụgbọ ala e akwa akwa na mkpokọta ụdị egwuregwu pirate!
O doro anya na ụmụaka ga-enwe obi ụtọ n'ịchọpụta ihe ndina ha ka ha ghara ịchọta Usoro 1... ya mere, ị nwere ike ịhọrọ ịmepụta ime ụlọ nile nke ụwa nke ụgbọala ma ọ bụ itinye nanị akwa dị na ụdị a, ma eleghị anya na-elezi anya iji jikọta ya na eg agba nke mgbidi.
O doro anya na a na-eme akwa akwa igwe ndị a maka ụmụ agbọghọ na karịsịa ị ga-ahụ maka ụfọdụ ụdị nke nsụgharị abụọ dị iche iche na agba ....
A na - eji nlezianya mee akwa akwa niile na ị ga - enwe ike ịmasị nkọwa nke wiil ndị ahụ, ihe nkwụnye ahụ ha na - akwado n'oge asọmpi, na - enweghị ike ichefu ọdịdị pụrụ iche nke onye ọ bụla n'ime ha nke sitere na aerodynamic ka arụ ọrụ. ....
Kama ime ka umuaka anyi di nma ụlọ ndị isi ụlọ na softer na nnọọ ihunanya na nwanyị shades!
... ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ụmụaka n'ime ụdị kpochapụ e zuru ọcha M na-atụ aro ka ị lelee ha ngwọta dị ebube ...
Nke a bụ ụfọdụ ihe atụ nke akwa akwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ebe ị ga-esi na-enye ụlọ nwa gị ihe eji eme ka ọ bụrụ ụgbọala, ị ga-eleba anya na ngwa niile (ákwà mgbochi, oriọna, teepu, tebụl, oche, oche, F1 style cabinets ) na ịpị njikọ a.
... ma ọ bụrụ na nwatakịrị chọrọ ka ime ụlọ zuru oke "Mbibi" na akwa akwa ụgbọ mmiri? Ị mara na anyị nwere ihe niile eji eme ka ime ụlọ ahụ dum banye ụdị egwuregwu pirate? 😉
Ọ dịghị ...
... ụmụ gị na-aghọ ụmụaka ma ị ga-achọ inye ha ọmarịcha mma? ebe a na-eji ihe ndozi niile maka ọmụmụ ihe na eriri USB? na ụdị Dark-Metal?
Nke a bụ ihe ngwọta nke nwere ike imere gị! 🙂
Hụ ihe niile Ọchịchịrị - Metal ngwaahịa:
Chọrọkwu echiche maka ụmụaka gị?
Lee aro ụfọdụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ niile isiokwu dị na "Dynamic" usoro pịa ebe a!
Ihe ịmara tupu ịzụta sauna ...
Họrọ ụdị Ihe nabatara Ulo elu Hotel & BB ụlọ ụmụaka Baby bedrooms Ụmụaka uwe nwa Ụlọ zuru ezu Baby-themed bedrooms nwa Bambino owu osisi Montessori Natura Princess Rosa Selena Ebube Bebè Nkume na bumpers akwa nwa Osisi na-eto eto shelves Ihe mgbochi na mbadamba ihe Ime ụlọ ụmụaka Ngwa ngwa ngwa Uwe ime ụlọ Akwa ụra Nyere ụmụaka ụlọ ihi ụra Ụgbọ ala agba ọcha Calcio obi Ọchịchịrị Ọchịchị ike Ifuru osisi Nero paireti ezigbo Rosa Selena Tortora Trio Ezumike zuru ezu Ụmụaka ihe Tebụl akwa akwa blanket Ime ọkụ ọkụ Nda akwa Ime akwa akwa Akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Ụlọ oche oche Ime ụlọ Oche oche Ime akwa Uche ákwà Ime ụlọ Ogwe osisi Ngwa ụlọ Ụlọ ndị a ma ama Ụlọ nke oge a Dresser àkwà console agụ abụọ ochie akpa Echere ígwè upholstered osisi oge a akpa ígwè upholstered osisi Ụlọ abụọ maka 180 netwọk 200 ụlọ ochie oge a A Square na Ọkara ochie Ihe ndina akwa 120 × 200 oge a matarasị Ugboro abụọ mattresses Nwunye na-alụbeghị di Ugboro abụọ na ọkara Ndị isi na ndị Etiopia oche Settimini enyo complements ime ụlọ Outdoor Rugs kitchens Ụlọ ebe a Ụlọ na oche oche Ogwe 2-3 Ntu ọka Ebe obibi ala n'aka nri Ebe obibi ala n'aka ekpe Ebe akwa akwa Armchairs nọ na-eri Giardino Ngwa ngwa ngwa Mkpokọta Ogige Aces Ogige zuru ezu Ogige oche na oche ogige Gazebos Na-ehi ụra Sunbeds na deckchairs Ebe a na-anọ n'èzí Tebụl na oche Tebụl nkume dị ọcha Tebụl Cocktail Vases na ndị na-akụ ihe Ngwaahịa anyị ọkụ Ụbọchị abata Pịa Chandeliers oriọna uprights Ịgba Italian Ime ụlọ Ọkachamara mmanya Ngwongwo oge gboo cabinets Dresser àkwà Ụlọ ọrụ Studio oche Ntanet TV Ụlọ ihe ọmụmụ Ụlọ oche na-agba ọsọ Ntọala eji oche Office desk na oche set Tebụl na-ekpuchi Storefronts Spa & Mma Whirlpool ọdọ mmiri enyo Bathroom furniture Ngwá ụlọ ụlọ ịwụ ahụ Ụlọ nkwari ụlọ nke oge a Nchịkọta osisi Na-asa ákwà ụlọ Ụlọ iri nri kweere oche Ogwe ndị a ma ama Ogwe nke oge a Debe tebụl na oche Tebụl dị iche iche Tebụl taa anọ Omuma dị ọnụ ụzọ ere akwụkwọ Madie Mgbidi dị ndụ oche Nkwado TV Tebụl na oche Coffee tebụl Storefronts Oge oge a ọnụ ụzọ ere akwụkwọ Madie Mgbidi dị ndụ Nkwado TV tebụl Ihe ngosi nke oge a Studio & Office Akwụkwọ ọmụmụ akwụkwọ oche Ụlọ ihe ọmụmụ Ụlọ oche na-agba ọsọ Ihe mgbochi na mbadamba ihe n'ụlọikwuu